The Swedish rwezvemabhengi hurongwa | Apg29
The Swedish rwezvemabhengi hurongwa
Part matatu rinonzi The cashless rangano kubudikidza Cash Only.
The Riksbank kushanda nguva dzose, pasinei ake "nekwaakarerekera" zvinonzi zviri kwakaderedza kushandiswa mari. Riksbank rinobudisa gore negore mushumo unonzi "The Swedish Financial Market". Zvinosanganisira Nhamba kubhadhara. Ipapo unogona kuverenga Statistical mashoko akadai sei ATMs uye kadhi zviteshi zhinji mune Sweden.
The private mabhanga hunodzorwa nezvavanodavira guru mana. Nordea, Swedbank, SEB uye Handelsbanken. Banks nevachena-digital mari rinoshandiswa chete mukati kubhengi pachayo. Banks vari kusvika pamwero kubva nemumwe uye vakabata mumwe kuchengetedzeka izvo zvingaita vanoumba ngozi Domino mugumisiro zvemari nematambudziko. Zvava zvakajairika kuti zvimwe vatambi zvakadai makambani inishuwarenzi uye makuru chitoro maketani akawana mamiriro kubhengi. Pose, Sweden zvakabatana rwezvemabhengi mitemo inonzi muBasel III. mureza uyu zvinoda pemahombekombe 'zvemari pakusimba. Kunze ichi makirisito maitiro pane vaviri "akaturikidzana" inonzi weDanho I uye weDanho II, iyo kazhinji ine munataisireva. Izvi chaizvo cryptic, asi zvakanaka kuziva mashoko avo kuti gare gare uchida sika zvakawanda rwezvemabhengi mugadziriro.
The Riksbank uye General Council yagara pedyo ukama kuti paramende. The Riksbank zvakare une Executive Board. Munguva 1600s, Sweden aiva kubhengi voga. Riksbank vasangana pamahombekombe mushure kusauka chakatengwa neHurumende. Riksbank akatora chimiro munguva pfachura regency pamberi Karl XIs ushe. Munguva yedu, pemahombekombe basa kupamba uye Riksbank ari mutarisiri yose Swedish vakawanda kuburikidza kudzivirira napo kushandisa mari.
ipapo Riksbank aiva anotambura achivaratidza Banknotes. Mukutanga 90s akatanga fiscal mutemo pfungwa mitengo pane Gengi. The mari Riksbank Rinotarisira rinns chete panguva Riksbank. The Riksbank inonyanyoshandiswa mudziyo kudzora mubereko prices nokuchinja repo mwero kuitira kuti vamwe mabhanga achange ovimba kutevera. The mamiriro ezvemari kudaro chinoshamisa kuti repo mwero ndiko kunaka. Kana izvi zvaitika uye nemabhangi anotevera anogona wakafanana nowedu Denmark simuka rwakawedzerwa kudiwa mari.
The Riksbank kushanda nguva dzose, pasinei ake "nekwaakarerekera" zvinonzi zviri kwakaderedza kushandiswa mari. Riksbank rinobudisa gore negore mushumo unonzi "The Swedish Financial Market". Zvinosanganisira Nhamba kubhadhara. Ipapo unogona kuverenga Statistical mashoko akadai sei ATMs uye kadhi zviteshi zhinji mune Sweden. The Bank uyewo zvinyorwa mumwe mushumo kubhadhara rinonzi "The Swedish chitoro kubhadhara pamusika."
A guru chikamu Swedish rwezvemabhengi hurongwa chinoumbwa RIX. The Riksbank wacho RIX sys-on achaita mari yakakura inogona kuitwa pakati zvose zvikuru mabhanga. Mhando Most vachibhadhara nepa RIX kana iri mari, kadhi, zvikwereti, kuchengetedzeka kana mari. A shoma cryptic kakawanda kunzi RIX "rinopedza mari kuburikidza nezvikwereti uye receivables pachena mitemo". Zvinogona-akanyorwa ikakuruma sedzinopesana RIX aibata digitaalinen mari. An chinokosha mhando vachibhadhara, pensions vari iiswe Zvikwereti nhoroondo iri Riksbank kuburikidza RIX.
A vashomanana Swedish nemabhengi vamwe yokumwe vane nhoroondo munyika RIX - ino. Pakati vatorwa kuoneka Citibank uye Morgan Chase. Vamwe mabhanga tensak Bank uye Ecobank haisi zvakabatana RIX. Banks kuti havana RIX nhoroondo vanogona kushandisa maitiro achishandisa Marshal.
Ishe Princess Mint, Dragon Credit Card uye Black Knights
Pakanga kamwe muchindakadzi ainzi Mint. Iye akagara chii vaitarisira kuva hombe pfuma mari iri muchimiro mari uye Banknotes. Asi kuonekwa kunyengedza. Pakati guru murwi, zvakanga chete pemvura muchimiro vashoma muzana yaiva mari. Panguva kupenyerera pamusoro conned mamiriyoni makadhi. In pakati murwi, zvakanga chete chinhu chikuru akasikwa nezvakaipa mashiripiti. The anoshaiwa inonzi mari digitaalinen vakagamuchira mutero nuolet kutarisa yakakura kupfuura chaizvoizvo zvakanga. Around kumucheto nemurwi vakadirana nezvikwambo duku bhowa inonzi vokubhengi. Mangoti munhu akaedza kubvuta mari saka hissed uye akaratidza zvakajeka meno ake unopinza. Raiva bravest uyo akatsunga kubvuta mari chete.
The zvakaipa dhiragoni ake kadhi cashless dema knight aida kubvisa zvose mari uye kuuraya wamambo. kites kwakadaro uye venhema mutero pazvikomo dzaiwanika munyika dzakawanda. Pane imwe nguva, vateresi pazvikomo rinenge chete yaiva mari. Asi pashure zvakaipa navauki kubva guru kure nyika SamUSAmien akasika pfupi hwamakava, makadhi uye pakakoromoka achibatsirwa kutsinga vakava chii chakava. Wizards achidzungaira pakati dzose, achiparadza mutero muzvikochikari nokuzadza pavo makadhi uye isina. Vatatu yakaipisisa navauki vakoma Mastro, Expresso uye rahaa.
Ngationei tanga zvimwe zvakaipa Knights sezvo vanogara patafura serin'i makadhi uye vakaronga kuuraya muchindakadzi Mint uye kubvisa mari zvachose kubva murwi. Mumwe Knights ainzi Riksbank. Basa rake kuitira kuti mari anoramba pamusoro zvakaenzana kunyange pamurwi inokura uye inokura.
Ari kwazvo zvinozivikanwa munyika Finansien. Hatizivi kana kukuudza chinhu zvakawanda nezvake.
Mumwe knight anonzi FSA. Mangoti munhu kunyange anokuzendamira shoko akapakatira kumwe munyika oblong nyika paanosvika kunze uko, Finansien kwamazuva akawanda, iye yells kunze shoko chete mumigwagwa kusvikira iye chose shoshoma izwi.
キ 0 "Tinofanira kubvisa mari kumasangano zvishoma nezvishoma!"
Chimwe knight kuti Finance Association.
キ 1 "kuba!, Ugororo!" Yells knight ichi.
It kunoitika pose munhu akaba chimwe chiduku mari mari imwe nzvimbo muna Finansien.
キ 2 "Kana isu kubvisa mari mugove, hapana kuba!", Anotaura nechivimbo.
(Financial Supervisory Authority chiri sangano pasi Bazi Finance. It akasikwa 1991 kubva kwemapazi mamwe masangano maviri. Its chikuru basa iri kuongorora kuchengetedzeka zvokutengeserana uye makambani zvemari. The FSA rave tasked kuti "kusimbisa nzvimbo yevatengi pamusoro musika mari." Cashless Zvose akasarudza zvachose pamusoro pemisoro yedu .)
Chimwe vaviri Knights zvakafanana propsar pamusoro cashless nzanga Wholesale Development uye Swedish Trade. Aimbova munhu tsvakurudzo hwaro uye ekupedzisira sangano bhizimisi. Zvino Knights yakasarudza zvaizoitika ichi topsy-turvy ngano. Vanosara vakafamba pamwe chete uye akadzinga minondo yavo mumwoyo varombo muchindakadzi Mint kunyange akachema uye akateterera hwake. Sezvo vakanga groveling uye zvinokambaira nenyoka Credit kadhi mambo yose. The zibukanana akapisa zvose yacho ake romoto
mweya. The Knights akatora zvose mari kubva nemurwi uye dumped muchindakadzi uye nevaya vari mudziva.
Vaiziva kwazvo kuti dhiragoni pasina matambudziko aigona upedze muviri wakafa muchindakadzi mune imwe chete nokuruma. Asi chii kana akanga netsaona netsaona kumedza mari kana mbiri panguva imwe nguva, pamwe akanga vasonanidza ane mari shoma iri nguo sezvo kuchengeteka. Zibukanana chaizvoizvo sema kwazvo mari. Ndokusaka ari Knights yakasarudza Dump muchindakadzi mudziva pane kupa zvokudya wake nenyoka. The zibukanana zvino dzokuvanda yake ake akakura murwi makadhi. Kana munhu kwakakanganisa sei iye pawing zvaasingakwanisi wacho ane huru yakakwirira kadhi zvokuti ndokuvhungwa pamusoro mari uye uremu. End nyaya.
By achitaura pamusoro kubviswa mari uye kurwisa cashless muna Sverge zvatinogona kana kwete kwenguva kudzivirira Zvino kanenge kunonotsa nyaya anova chokwadi.
Kana zvakaipisisa aanenge, tinotenda kuti kunyange bhowa ngano awana kuenderera umo zvose yaguma zvakanaka.
Zvakadini kana mari dzamasangano haarambi zvishoma nezvishoma?
About chiuru makwapa akasvibirika vanobviswa zvingasava zvakawanda musiyano kunze vaya Somuenzaniso, kutenga motokari zvinodhura mari. Asi kana nevasina 500 uye 200 -kronors -sedlarna kubviswa rinotanga matambudziko chaiwo. Zvipfeko uye zvokudya achiri kushanda zvakanaka zvakanaka, asi chete maererano kuritenga chaiko. Asi kana mumwe anotenga sikuta nokuda 25000 mazana zvidimbu ane anofanira mushambadzi tichiverenga Banknotes 250. Dai 200 - kronor Banknotes zvichaitika kuti ikoko, iye achiri asina zvokuti kufara kuverenga kusvika 125. Iye anorasikirwa wevasungwa kana mutengi chinoitika kutaura naye achiri kukosha. Kwapera nguva, anogona kuramba kugamuchira yakawanda mari. Cash rinowanika siyana masangano nokuti rinoshanda zvikuru nzira.
Zviremera vari mukana wose kupomera akapakatira kubvisa mari pane matambudziko munzira inobatsira. Veruzhinji anoteerera kwete. Imwe ongororo akawana Somuenzaniso, kuti muzana 12 chete vanofunga zvidimbu chiuru hakudikanwi. Makore mashoma apfuura yaiva zvikuru-kuziviswa akapakatira muna Jonkoping. Rakanga Mazuva mashoma pashure peizvi, zvinganaka kuti FSA kusvikira chiuru makwapa akasvibirika raizobviswa. Nokufamba kwenguva sei iwe uyewo kubvisa makwapa akasvibirika mazana mashanu nezana tags.
Mumwe anogona kuwana kufanana pakati mari uye nemotokari. Zvaizova sokunge kutiza motokari kuba kuti kurambidza Marori uye nemotokari. mabhasikoro chete uye mopeds aibvumirwa kuramba izvo kuti ipapo dzinoenderana diki mari nemasangano. Zvakanakisa, unoda kuti mopeds uye mabhasikoro kunyangarika zvakare. Tinofanira zvichida kuisa pasi chero chemishonga nokuti zvinoitika kuba zvimwe mishonga uye kushandisa zvinodhaka? Kuti nguva kupomera akapakatira kuti kubvisa mari chaizvoizvo bordered kuti wakachena zvechihwana.
Apo 100-Krona uye zvishoma mari chakasara, zviri musimboti run nokuda mari zvachose. Zvadaro edza panguva imwe nzira yokubudisa yacho kubhangi (kana uchiri kukwanisa ngavabude mari ikoko) muchikumbira kronor 3,000 muna 50 - kana zvidimbu 20. Unofunga kubhangi mudonzvo kutarisira chaizvo gobvu wads Mari sezvo muchina ngaakudze kumusoro kana pane chakaipa mufananidzo 150 manotsi uri Chinyorwa kuverengwa anofanira kuramba ari mubhengi? Kashoma 75 mashanu zvidimbu kana. ATMs inobva kushaya mumasangano ose Banknotes. Kana munhu aigona hunonzi vachabvumidzwa kubhadharisa 50 uye 20 bindepinde kwaizova gobvu wads Mari iri michina. Mari mari monica muchina kuti kuderera uye bhuku mari kwaizova yakakura uye zvishoma nyoreka kuti mari transports.
It ane dzimwe nepedyo zvave vaitaura kuti chete mari kusvika 50 Kroner ukoshi pasina manotsi. Izvi kukutadzisa mhiri marwadzo pachikumbaridzo kuti mari kuti nomuongorori navanopinda kumucheto. Chii chaizoitika withdrawals kubhengi uye Vending muchina? Quite sezvisingaiti kuti vachakwanisa atore mari iri mari muchina ipapo. Coin mabhanzi kana zvichida ATM mari wokutinhira kwamakumbo sezvinoita old machine slots kana chii? Kashoma. Chinetso ndechokuti haufungi nezvazvo pa zviri pfungwa mhando ichi kana nani kuti iwe chete vane mari kubviswa ziso.
Zvaireva zvakanaka kuti unofanira kutora mari iri ngaakuitirei pachinzvimbo pamwe nezvinetso. The zvitoro dai ipapo Chokwadika uyewo yekudyidzana hombe Vhoriyamu mari asi ane zviduku zvachose ukoshi chaiko. Cash senga zvichava zvikuru dzinokwanisa zvinodhura uye zvakawanda zvakaoma kushandisa. Kunyange iye zvino, ari kushaya Mari mubhizimisi kurasikirwa nokuda retailer. Zviri kure zvose kuti muzive. Pachako ndinofunga kuti mari dziri nani uye zvakawanda anoshanda pane Banknotes. Asi ipapo pachava mari masangano ose. Kunyange soro.
Zvinonzi nyore kunzwisisa kuti mumamiriro ezvinhu aya, saka, zvakare kunze ATMs. Uyezve, chokwadi uyewo uttagsutomaterna chinhu kunaka kwazvo nokuti zvinoda kadhi rechikwereti kushandisa, uye kuurayira mabasa mubhangi. Business kuri zvichida kuva zvishoma uye kashoma kuti vanoda kushandisa mari. Vamwe mabhanga chete kupa 500-kronor pamusoro pakaunda kuburikidza namahwindo njodzi kuchengeteka hurongwa. Zviri ungwaru kudavira kuti mabhanga aya kuti vadzokere manotsi zviduku zvakare.
Chokwadi kuti kunyange zvaibvira kukurira manotsi uye mari 20 chete vandotenga zvokudya panguva uye kutenga zvakachipa kana kushandiswa zvipfeko. Asi sezvisingakundiki dambudziko sei kuti abate mazana mabhiri duku pamwedzi. Musafunga kuti mabhanga aizopa izvi. An yokunyanyisa chimbichimbi mhinduro ndakafunga pamusoro kuti "kutenga" mari akakungurutsa kutenga zvakachipa
dzakasiyana pamusoro zvinokosha. Mari ndiwo akawanda zvakadai fairgrounds. arcades uye vatengesi sei kuti mari? Akunoita handizivi asi zvingava zvinofadza kuongororazve pamusoro.
Zvaringana kutora miviri masangano pakukura mari, zviri pamwe vaneta kuunganidza mari iri yasara mari mukugadzirisa nemabhengi zvimwe uyewo michina. Nokuti vanoda kuchengeta mari anouya zvino kuita kuzvidzivirira rukuru sezvinobvira kuti sangano rokubvisa ikozvino. Kamwe raitwa riri anenge zvachose nemhepo nokuda mari.
Musiyano uri pakati makadhi uye dzimwe modernities munhau?
Musiyano ndechokuti hurumende masimba, makambani zvemari uye zvitoro zvishoma nezvishoma kumanikidza kukura munhu zvachose cashless nzanga pasina nzira. Hazvina pamusoro kuti nokufamba kwenguva sezvo nzanga inofanira kuva nekodzero kusarudza pakati makadhi (uye vamwe vasiri mari zvinhu) kana mari. The musarudzo ichiri kusvika pamwero chinogara nokungoti mumwe nemishonga kukura. Cars kunge mhanyisa, sleeker, njodzi, yamunenge uye isingadhuri kuburikidza kwemakore. Over nguva, nekuti vanhu rwoga vakatenga zvakawanda motokari. Asi maererano makadhi, zviri zvikurukuru pamusoro kumanikidzwa coaxing ne kubvuma uye zvishoma nezvishoma kumanikidza kuti vanhu kuzvishandisa.
Muenzaniso dzinongoitika nhoroondo uye kwesayenzi kukura ndiko vanhu vabatsirwe kana kuziva kunoita kubva pakutanga muganhu. It ingabva ibwe Age vanhu kuti födosöket kutsvaka zvitsva kunovhima chikonzero kuti kufamba muchadenga. Kuburikidza kukura hondo uye zvombo ari wechisikigo, kunyange zvikuru kunaka mumwe. Asi kukura kontantlösheten ndiyo rwokuzvarwa pamwe. Zviri zviviri tyisa
uye kunaka. Chiitiko rwakatsauka vainyanya rinosundwa nemakaro kwesimba. Chinhu chinokosha kukanganisa ari cashless nharo ndechokuti kontantlöshet ishiri kuwedzera dzinongoitika. Uyo anofunga kuti kontantlöshet Chiitiko dzinongoitika kuti achamera muna zvichida mazana emakore kuita zvakaipa. Hurongwa anogona nani ingafananidzwa mhuka mutated uye atrophied sezvo zvipenyu anogona kana vanofanira kurarama pakupedzisira.
Unogona kusarudza kufamba, kutenderera, kuchovha bhazi kana kuenda nemotokari kubasa. Kunyange zvazvo motokari yave kuwanika kuruzhinji mune nehasha zana nemakore, kuchine zvakawanda vanoda kuva pasina motokari. Izvozvo zvinongofanana nokushandura mazuva runhare, terevhizheni, redhiyo, Indaneti, makombiyuta uye zvichingodaro. Kuti mumwe usade kusataura nokushandiswa chiedza Mabumba uye dzemagetsi yamavira nekuti izvi zvinodiwa zvachose uye kukura dzinongoitika. Asi kunyange iyi, pachine mukana kushandisa makenduru eparafini Stoves uye serimwe rinogona kutsiva vaya vanoda. Zvingasava nomusoro uye kutsutsa zvounzenza kumanikidza munhu wose kutyaira. Asi maererano makadhi ane zveEl evanhu. Hapana chinoratidza kuti kontantlöshet ane utano uye dzinongoitika rwokugadzira kukura.
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 06:54